Mucaaradka Somaliland oo sameystay ciidan hubeysan iyo cabsi laga qabo dagaal. | Entertainment and News Site
Home » English News » News » Mucaaradka Somaliland oo sameystay ciidan hubeysan iyo cabsi laga qabo dagaal.
Mucaaradka Somaliland oo sameystay ciidan hubeysan iyo cabsi laga qabo dagaal.
daajis.com:- Gudoomiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe ayaa eedeyn culus u jeediyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu ku eedeeyay inuu jabiyay sharciga, qaadayna talaabooyin wax u dhimaya dastuurka Somaliland.
Injineer Waraabe ayaa qiray in madaxweynaha uu la soo baxay dhaqan cusub oo ah kala saarida ciidamadda, isagoo kuwa ilaaliya mucaaradka aanu u aqoonsaneyn jney yihiin ciidan qaran, sida uu hadalka u dhigay.
“Muuse Biixi waxa uu keenay in uu isku dayo in mucaaridka xabad la dhaco oo musharaxii xisbiga Waddani iyo ilaaladiisa in uu labo gaadhi mariyo, wuxuu keenay in ciidamadii kala saaro.” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Talaabooyinkaas isbiirsaday oo lagu daray isku daygii dil ee musharaxa Wadani C/raxmaan Ciro ayuu tilmaamay iney keeneen iney ilaalo gaar ah sameystaan oo ay is hubeeyaan, isagoo ka digay in la carqaladeeyo amniga dalka iyo howlaha doorashada loogu diyaar garoobayo.
“Dhaqamadaas waxay keeneyn in uu ku dhaco is-difaac, oo halka yimaada dad hubeysan oo difaacaya asxaabta ayaa jooga. Dadka uu leeyahay waa beelo ee way difaacayaan waa muwaadiniin reer Somaliland ah oo ka xanaaqay ficilka uu sameeyay.” ayuu Waraabe hadalkiisa ku soo xiray.
Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Maayarka Hargeysa iyo Wasiir hore Warancade ay u istaageen xalinta khilaafka axsabta mucaaradka iyo xukuumadda, waxaana jira warar sheegaya in Muuse Biixi uu albaabada ka soo xirtay dhinacyadan doonaya iney xal ku dayaan muranka, halkii gacan ka hadal la isla gaari lahaa.